Gadzira shanduko pakati pemifananidzo miviri muGIF faira ine Flash Shanduko | Ndinobva mac
Gadzira shanduko pakati pemifananidzo miviri muGIF faira ine Flash Shanduko
Ignatius Room | | Mac App Store, Mac zvirongwa
Kungofanana nemasikirwo ane zvinotevera, maGIF zvakare ane yavo legion yevateveri. Kugona kuratidza manzwiro edu kana manzwiro kuburikidza neGIFs zvakanyanya kutaridzika pane kuzviita kuburikidza nemasikirwo akasiyana atinawo, nekuti mazhinji acho haasati anyatso kujeka izvo zvavanomiririra.
Mazhinji mameseji ekunyorera anotibvumidza kuwana raibhurari yeGIFs iyo inotibvumidza isu kuwana chero mhando yemufananidzo inomiririra izvo zvatinoda kuratidza. Zvisinei, zvinogonawo kunge zvakadaro isu tinoda kugadzira edu maGIFs kunyanya patinenge tichida iwo akaenzana.
MuMac App Store isu tinazvo zvatinoshandisa zvakasiyana zvinotibvumidza kuti tigadzire maGIF kubva muvhidhiyo. Asi kana izvo zvatinoda zviri gadzira mifananidzo kubva pamufananidzo, chinhu chacho chakanyanya kuomarara nekuti huwandu hwekushandisa ishoma kwazvo.
Flash Transition ndeimwe yadzo, iri nyore application iyo inotibvumidza isu kuti tigadzire iyo GIF faira ine mbiri mifananidzo ine shanduko muchimiro chefade kuti ubatane navo kuitira kuti pasave nebotch iyo chero munhu anogona kuita. Iko kushanda kwekushandisa kuri nyore kwazvo. Tinofanira chete wedzera chifananidzo chinotanga nemifananidzo uye nemufananidzo watinoda kuti upedze.
The Anwendung kwaita uchave mutariri wekubatanidza zvese mifananidzo achiwedzera fade mhedzisiro pakati pese, nehurefu hwatakatangisa kare. Kuti shanduko iwedzere kunakidza, tinogona kuwedzera mwenje wechiedza kuratidza nzvimbo yakakoshesa yechirongwa chatiri kugadzira.
Flash Shanduko ine mutengo wenguva dzose muMac App Store ye7,99 euros asi kwemaawa mashoma kana mazuva, mushambadzi haana kudoma nguva ichave ichiwanikwa, isu tinogona kurodha pasi zvachose mahara kuburikidza neinotevera link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Gadzira shanduko pakati pemifananidzo miviri muGIF faira ine Flash Shanduko
ToothFairy iyo application yekugadzirisa AirPods neMac yedu yakagadziridzwa
Amazon yatove inopa yekumhanyisa mimhanzi sevhisi pamwe neshambadziro muUnited States